Amar shalay ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka oo daaqada laga tuuray +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Amar shalay ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka oo daaqada laga tuuray +Sawirro
Guddiga doorashada dadban ee Federaalka iyo kan heer Puntland oo xalay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garowe ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay amarkii shalay ka soo baxay Guddiga xalinta khilaafaadka oo ahaa in la joojiyey doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee illaa shan beelood.
Guddoomiyaha Guddiga heer Puntland ee xalinta Khilaafaadka Xaaji Abuukar Cismaan Cabdi ayaa shalay sheegay inay soo gaareen Dacwado badan oo lidi ku ah ergooyin shalay ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka heer Puntland.
Hadaba afhayeenka guud ee Guddiga doorashooyinka dadban ee heer Federaal Maxamed Keynaan iyo Gudoomiyaha Guddiga Doorashada ee Heer Puntland Khaliif Aw-Cali ayaa si wadajir ah u sheegay in dhawaan la dooran doono Xildhibaanada aqalka hoose u matalaya beelaha Soomaaliyeed, isla markaana aysan waxba ka jirin go’aankii ay sheegeen Guddiga Xalinta Khilaafaadka.
Waxay intaas ku dareen inay joojin karaan arrimaha la xiriira doorashada Guddiga Doorashada dadban ee heer Federaal oo kaliya, iyagoo xusay in guddiga xalinta khilaafaadka uusan awood u laheyn inuu joojiyo doorashooyinka.
Waa markii ugu horeysay ee awaamiir iska hor imanaya ay soo saaraan gudiyada doorashada dadban iyo kan xalinta khilaafaadka, waxaana arintan loo sababeeyey iyadoo aysan jirin shuruuc kala hageysa.